चीनसँग लड्न भारतले नेपालीलाई अघि सार्दैछ, गोरखा भर्तीकेन्द्र तत्काल बन्द गर्नुपर्छ - A complete Nepali news portal based on news & views
- हिरण्यलाल श्रेष्ठ, रसियाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:१७ September 11, 2020 Nonstop Khabar
लद्दाखमा ४ हजारको संख्यामा गोर्खा सैनिक पठाइएको भनिएको छ । भारतले गोर्खा सैनिक नै युद्ध मैदानमा पठाउनुको मुख्य कारण के होला ?
भारतले जहाँ पनि अफ्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रोमा गोर्खा सेनाको प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यो पनि अफ्ठ्यारो ठाउँ हो । गोर्खालीलाई अगाडि पठाउने काम गरिरहेको छ । उसका सेना पनि मरिरहेका छन् । तर मरे पनि नेपाली मरुन् भन्ने सोच हुनसक्छ ।
तपाईंलाई यो भारतको कस्तो रणनीति हो भन्ने लाग्छ ?
चीन र भारतका रक्षामन्त्रीबीच मस्कोमा वार्ता भयो । अहिले भिडन्त पनि भइराछ, मनमुटाव पनि भइराछ, वार्ता पनि गरिराछन् । उनीहरुकोबीचमा धेरै लामो समयदेखि सीमाकै कारण झडपहरु भइरहेका छन् । यो निरन्तर छ । सीमा समस्या समाधान नहुन्जेल यस्तो भइरहने छ ।
भारत—चीन सीमामा नेपाली पठाएपछि यो युद्ध चीन र नेपालबीचको जस्तो त देखिँदैन ?
नेपाल र चीनबीचको युद्ध भएजस्तो होइन । गोर्खा भर्ती नेपालको विरुद्धमा प्रयोग नहुने तर अरुको विरुद्धमा प्रयोग हुने सम्झौता बमोजिम नै गरिएको हो । गोर्खा सैनिक प्रयोग गरेको यो पहिलो पटक पनि होइन । नेपाल पो भारत–चीनको लडाइमा तटस्थ बस्यो, गोर्खा सैनिक त प्रयोग गर्यो नि । आफ्ना सेना हुन् । भारतले पहिले पनि प्रयोग गरेको थियो । अहिले पनि गर्यो । भोलि पनि गर्ने नै छ । मरे पनि नेपाली मरुन् भन्ने सोच हुनसक्छ । यसलाई नेपाल—चीनको युद्धका रुपमा चाहिँ बुझ्न मिल्दैन ।
यस्तो अवस्थामा लद्दाखमा गोर्खा सैनिक पठाउँदा सैनिक परिवार र सम्पूर्ण नेपालीलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला ?
सैनिक परिवार अर्काको देशमा गएर मर्दा खुसी हुने भन्ने त हुँदै भएन । तर जागीर छोड्न पनि सकेका छैनन् । सरकारले नै खारेज गर्ने हो नि यस्ता असमान र खराब सन्धीहरु । देशको स्वाभिमानलाई नसुहाउने सन्धीहरु खारेज गर्नुपर्छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि १९ औं शताब्दीको जस्तो परम्परा जारी राख्नु हुँदैन । गोर्खा सैनिक भर्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुपर्छ त भन्नु भयो तर के यो सम्भव छ त ?
नेपालले हाइटायम गोर्खा भर्ती बन्द गरिदिनुपर्छ । यो असंलग्न नीतिको विरुद्धमा छ । असल छिमेक नीतिको विरुद्धमा छ । छिमेकीहरुको विरुद्धमा नेपाली प्रयोग भइरहेका छन् । अब गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने समय आइसकेको छ । यो कोलोनियल लिगेसी (औपनिवेशिक उत्तरदान) हो । अहिलेको युगमा यो अनुपयुक्त छ । यो खारेज गर्नुपर्छ ।
उनीहरुलाई फर्काएर नेपाली सेनामा नै भर्ना गर्नुपर्छ । यो सबैकोलागि उपयुक्त हुन्छ । पहिले पो जागीर थिएन । रोजगारीको अवसर थिएन । विकल्प थिएन र गोर्खा भर्तिमै जानु पर्ने बाध्यता पनि थियो अहिले त्यस्तो छैन । गोर्खा भर्तीमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले धेरै कमाइ रहेका छन् । नेपालमै पनि धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । यहीँ नयाँ नयाँ कलकारखाना खोलेर युवालाई रोजगारी दिने हो भने कोही पनि मर्न जाँदैन नि । अब विकल्प छैन भनेर तर्क गर्ने आधार छैन ।
नेपालले अब पनि पहिलेको बहादुरीको गाथा गाउने होइन । नेपालले असंलग्न र शान्तिप्रिय देश हुनको लागि आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा पठाउनु र निरन्तरता दिनु ठीक छैन । अहिलेको वामपन्थी सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनु सुहाउँदो कुरा पनि होइन ।
जापानवासी नेपालीहरुको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा रहेको दावी
मृगौला पीडितलाई प्रवासी नेपालीको आर्थिक सहयोग
राजेश हमाल अभिनित ‘जुनमा हेरूँ तिमीलाई’ (भिडियो)
यसरी भित्र्याइयो हनुमानढोका दशैँ घरमा फूलपाती (फोटोहरु)
देशभर ४४९९ जनामा संक्रमण, उपत्यकामा मात्र २७२०
सत्तारुढ नेकपाका दुई समूहबीच झडप, जिल्ला सदस्यको मृत्यु
एकहजार बढी चिनियाँ विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको भिसा अमेरिकाले रद्द गर्यो